Tijaabo: Dadka indhahooda Okiyaalo U baahanyahay Oo Dhan Sawirkani Ma arki Karaan#tijaabo casri ah | Xaqiiqonews
Tijaabo: Dadka indhahooda Okiyaalo U baahanyahay Oo Dhan Sawirkani Ma arki Karaan#tijaabo casri ah
Dad badan ayaa Sawirkani ku wareeray oo uu shaki ka galay xitaa in Aragooda wanaagsanyahay iyo in kale.
Qiyaanadi ama waxaan loo yaqaan” Arag Moodsiintani” waxaa laguu soo sawriyaa sawir oo loo dhigay si ka duwan sida caadiga ayna adagtahay in uu fahmo qof walbo kaliya waxaa fahmi kara qofka indhaha ku goda oo muddo ku dil fikira.
Hadaba sawirkani aynu isku dayi doonaa in aan idin soo gudbino waa sawir in la fahmo ay adagtahay hadii uusan qofka fikir dheer sameynin.
Dad badan ayaa horay loogu soo tijaabiyey in badan oo ka mid ah wey ku fashilmeen hadaba is weydii adiga ma guuleysan kartaa?!
Sawirkani waxaa ku jira seddex qof oo rag ah hadaba halkee sawirka kaga jiraan si fiican u eeg ka dibna ku dul fikir isku dayga waa muhiim.
Hadii aad ku Wareertay in aad ogaato halka sawirada ragga kaga jiraan markale si fiican u eeg sawirka hoose oo goobaha ragga kaga qarsameen lagugu muujiyey calaamado Hadda ma aragtaa? hadii jabaabtaada ay haa tahay waa hagaag indhahaaga hadii aadan aragine waa arin u baahan baaritaan in aad ku sameyso indhahaaga !